पक्कीपुल समयमै नबन्दा जुम्लाबासी पीडामाः खोलावारी बिरामी खोलापारी एम्वुलेन्स !
२७ महिनाभित्र निमार्ण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता, अझै ८० प्रतिशत काम बाँकी
निर्माण सञ्चार, जुम्ला | पुर्वमा पर्ने विकट पातारासी गाउँपालिकाको उर्थुचौतारामा निमार्णधिन पक्कीपुल समयमा नबन्दा आवत जावतमा समस्या परेको छ ।
सबै वडामा सडकसंजाल जोडिएपनि उर्थुको पक्की पुल वर्षौदेखि नबन्दा घण्टौँ पदैल हिँड्नुपर्ने, पिठ्युमा भारी बोक्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन ।
पातारासीका तारा बोहोरा भन्छन्, ‘विरामी पर्दाको दुःख सम्झिदा मन भक्कानिएर आउँछ ।’ हाल गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स ल्याइसकेको छ साथै सबै क्षेत्रमा सडक पनि पुगिसकेको छ ।
तर, वर्षौदेखि उर्थुचौताराको पक्कीपुल नबनेपछि पातारासी गाउँपालिका पश्चिम भेगका स्थानिय अझै स्टेचरको साहारामा विरामी बोक्न बाध्य छन् ।
पश्चिम भेगका बाङ्खखोला,घोडेसिन, माथिल्लो राजीकोट लगायत गाउँका स्थानिय उर्थु खोलाको पारी पाटी एम्बुलेन्स चलेको मात्रै देख्छन् तर आफूले उपभोग भने गर्न पाएका छैनन् । पुल निर्माण समयमै नबन्दाको पिडा पातारासी पश्चिम भेगका स्थानियले भोगीरहेका छन् ।
‘पुल निमार्ण नभएको पिडा पहिला त्यति थिएन’ स्थानीय मुनकोईला बुढाले भनिन्, ‘अहिले गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स ल्याएको छ, पुल तुरुन्तै निमार्ण भएको भए खोला वारी विरामी खोला पारी एम्बुलेन्स हुने अबस्था आउँदैनथ्यो ।’
आधि सेवा पाउने आधि नपाउने भन्दै स्थानयीले तत्काल पुल निमार्ण गर्न गाउँपालिकाको ध्यानकर्षण समेत गराएका छन् ।
भारतीय दुतावासले पातारासी गाउँपालिकालाई दुई साता पहिले अनुदानस्वरुप एम्बुलेस दिएको छ । यसको गत बुधबार उद्घाटन गरिएको हो । उद्घाटन पश्चात एम्बुलेन्सले एकतर्फी सेवा भने दिइरहेको छ ।
गाउँपालिकाको पुर्वी क्षेत्रका स्थानीयले एम्बुलेन्सेको सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् । एम्बुलेन्स ल्याएपछि नदी तराएर गाउँपालिमा पुर्याइएको थियो । गाउँपालिकाले भने सँधै नदी नतराउने बताएको छ ।
यता सदरमुकाम खलंगा र पातारासि गाउँपालिकालाई जोड्ने उर्थुचौतारामा पक्की पुल नबन्दा एम्बुलेन्स लगायत अन्य सवारी साधन संचालन समस्या भएको हो ।
पातारासी गाउँपालिका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन एम्बुलेन्सको जोहो भएपनि उर्थु चौताराको पुल नबन्दा स्टेचरमा बोक्ने समस्या नफेरिएको स्थानीयले बताएका छन् ।
समयमा पुल निर्माण नहुँदा गाँउपालिकाबाट विरामी ल्याएर एम्वुलेन्स नदीको छेउसम्म पुर्याउने गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्षिमन बोहोराले बताए ।
‘पुल नबनेपछि एकतर्फी सेवा भएपनि दिन बाध्य भएका छौँ ।’, उनले भने, ‘छिटोपुल निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरेका पनि छौँ ।’
जेठ महिनासम्म पुल सम्पन्न भई सवारी साधन संचालनमा आउने निर्माण व्यवसायीले आश्वासन दिएका छन् ।
२७ महिनाभित्र निमार्ण सम्पन्न हुने सम्झौता भएको पुलको निमार्ण कार्य अहिले झण्डै एक वर्ष बढी समय बितिसक्दा पनि पिलर मात्रै हालिएको छ भने अझै ८० प्रतिशत काम बाँकी छ ।
पातारासी गाउँपालिकाको मुख्य व्यापारी केन्द्र मानिने उर्थुचौतारामा पुल नबन्दा स्थानीय कृषि उपजहरु गाउँमै थन्कीएको स्थानीय धर्मसिंह बोहोराले बताए ।
अहिले पनि सदरमुकाम आउनका लागि १ दिनको बाटो हिँड्नु पर्ने बाध्यता छ । पक्की पुल नबन्दा केही स्थानीयलाई गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स आउनु हर्ष न विस्मात जस्तै भएको उनले गुनासो गरे ।
सम्बन्धीत निकाय उदासिन
उर्थुचौतारामा निर्माणधिन पक्की पुलका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय जुम्लाका प्रमुख राजकुमार गोहित बताए ।
‘म भन्दा पहिलाको प्रमुख ईन्जिनियर भएको समयमा सम्झौता भएर काम सुरु भएको हो’ उनले भने ‘अहिले त्यो सम्झौता फाईल कहाँ छ र आयोजना कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने कुनै जानकारी छैन ।’
त्यसको लागत कति हो कति बर्षमा सम्पन्न हुने हो त्यो पनि जानकारी नभएको प्रमुख गोहितले बताए । कार्यालय प्रमुख फेरिदैमा विभिन्न आयोजनाका फाईल पनि फेरिने अवस्थामा विकास कसरी होला ? भन्ने प्रश्नमा उनले विकास फाईलले होईन स्थानयको सक्रियता तथा प्रशासनको ताकेता हुनु पर्ने जवाफ दिए ।
यस विषयमा प्रशासन पनि मौन छ । जुम्लाका ६० प्रतिशत आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न भएका छैनन् । किन समयमै भएनन् भन्नेबारे जिल्लाको तालुक निकाय भएर पनि कुनै चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।